FONDATION TERRA: Mitondra fiovàna eo anivon’ny tokantrano ny Cleaning Challenge - Journal Madagascar
Iray volana katroka no nanomboka ny fifaninanana “Cleaning Challenge”. Ny “efitrano fandraisambahiny” no lohahevitra nisantaran’ny mpifaninana ny lalao. Hiditra amin’ny volana faharoa ny mpandray anjara. Ny « rénovation » na ny « fanavaozana » no lohahevitra ho resahina amin’ity herinandro ity. “Ampianarina ireo fianakaviana fa izay eo ampelatanana sy izay fahefana hananana dia efa ampy hanavaozana sy hanatsarana foana ny ao an-tokantrano”, hoy Randriamorasata Willah, tomponandraikitry ny serasera eo anivon’ny Fondation Terra. Fifaninanana momba ny fandaminana sy fanadiovana ny Cleaning Challenge. Ny Fondation Terra no mikarakara azy ka fianakaviana 11 no mandray anjara.
Manana vina hanova toetsaina sy fomba fanao ny Fondation Terra satria manomboka amin’ny toetsain’ny tsirairay ny fanovàna sy ny fandrosoana. “Manomboka amin’ny kely indrindra ny fiovana, ary tsy mila zavatra betsaka fa rehefa tsy mandoto dia efa manadio”, hoy izy. Ho famporisihana ireo mpandray anjara dia nozaraina loka ireo fianakaviana telo voalohany nanana salan’isa tsara indrindra ny sabotsy 09 oktobra 2021. “Hita fa miha mitombo lenta ny fifaninanana ary izany indrindra no nahatonga ny Fondation Terra manolotra fiofanana maimaimpoana ho an’ireo mpandray anjara”, hoy hatrany Randriamorasata Willah. Araka ny fijoroana vavolombelona nataon’ny mpifaninana dia nahatsapa izy ireo fa nisy vokatra tsara teo anivon’ny tokantranony ny fandraisany anjara tamin’ny Cleaning Challenge.